ငါအရင်ဝင်မယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ငါအရင်ဝင်မယ်။
Posted by nigimi77 on Jan 20, 2011 in Politics, Issues | 34 comments
၅နှစ် မကလို့၁၀ နှစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထောင်ပဲ အကျခံမယ်။ စစ်သားတော့ မလုပ်ဘူး တဲ့လား ။ အဲဒီ သကောင့်သား အထူအပါး တော်တော် နားမလည်တာပဲ။ ငါ့ကိုငါ ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ကြည့်မယ်။
၁။ နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတရှိလား ? မရှိသလောက်ပဲ။
၂။ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားနဲ့နီးစပ်သလား ? အနားကပ်လို့ တောင် မရဘူး။
၃။ ပညာတတ်လား ? တစ်ပိုင်းတစ်စပဲ။
၄။ ကိုယ်ခံပညာ တစ်ခုခု တတ်ကျွမ်းလား ? ငယ်ငယ်ကတော့ သင်ဖူးပါရဲ့ ။
၅။ အသောက်အစား ကွမ်းဆေးလိပ်ကင်းလား ? ကွမ်းကလွဲလို့အကုန်လုပ်တယ်။
၆။ အချိန်ကို လေးစားလား ? အလုပ်ကိုတော့ အမြဲ ၁၀ မိနစ်လောက် နောက်ကျတတ်တယ်။
၇။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိမ်းနိုင်လား ? 50/50 ပဲ
၈။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်ချင်စိတ်ရှိလား ? စားဝတ်နေရေး လုံးပန်းနေရတာနဲ့သေချာ မစဉ်းစားမိသေးဘူး။
၉။ မဲ ပေးလား ? မပေးဘူး။
၁၀။ ဘယ်ပါတီကြိုက်လဲ ? ဘယ်ပါတီမှ မကြိုက်ဘူး။
၁၁။ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားလား ? ၀င်စားလဲ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး။
၁၂။ စည်းလုံးချင်းသည် ခွန်အားပါဆိုမှ ? ဘယ်သူတွေ စည်းလုံးလို့ လဲ။
၁၃။ ဒါဆို တစ်ယောက်ထဲ လူစွမ်းကောင်းလုပ်ချင်တာလား ? ……………..။
၁၄။ စစ်မှုထမ်းချင်လား ? ထမ်းချင်တယ်။
၁၅။ ဘာကြောင့်လဲ ? ငါလုပ်တတ်တာ ဘာမှမရှိဘူး။ တတ်မြောက်မှ လုပ်လို့ ရမယ်။
၁၆။ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ ? မင်းသိစရာ မလိုသေးဘူး။
မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို ပဲ ကြည့်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖခင်ဆိုပြီး အော်နေကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ဘယ်လို လုပ်ခဲ့လဲ ဆိ်ုတာမေ့သွားပြီလား ? ပါးစပ်က ဘုရား လက်က ကားယား အတွေးအခေါ်နဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မတရား အုပ်ချုပ်မှုဆိုတာတွေ အော်မနေနဲ့ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဂျပန်ကိုချစ်လို့စစ်သားဖြစ်ရတာကို ကြိုက်လို့စစ်ပညာသွားသင်တာလို့မင်းတို့ဘယ်စာအုပ်ဖတ်ရဘူးလဲ ? ဘယ် အင်္ဂလိပ်ကို အားကျလို့ပူးပေါင်းတာလို့ ကြားဖူးလဲ ? သူတို့ စစ်ပညာသင်နေတုန်းက ဘယ်သူက စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ကောင်းမွန်စွာနေခဲ့လို့ လဲ။ အရာရာ စွန့် လွတ်ပြီး လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ဖက်ဆစ်တွေ ၊ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဒီ စစ်အစိုးရနဲ့ဘာတွေကွာသလဲ ? နောက်ပြီး အဲဒီတုန်း က လှုပ်တာနဲ့ထောင်ထဲရောက်တာ ကျောင်းထုတ်ပစ်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ အခြေ အနေက မတူဘူးလား။ လွတ်လပ်ရေးကို ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့မရနိုင်ဘူး ဆိုတာ မင်းတို့ တွေ အဖ လို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ မဟုတ်လား။ သူ ဘယ်လမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဘာလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ အားလုံး အသိ။ အဲဒီလို သကောင့်သားတွေ များနေရင် ရပါလိမ့်မယ် လွပ်လပ်ရေး။ တချို့ က ငါ့ကိုပြောတယ်။ လူငယ်တွေကို လေ့လာနေတာလားတဲ့။ ဒီခေတ်က IT ခေတ်တဲ့ ။ အဲဒီ IT ခေတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့လူငယ်တွေ ထက်မျက်ကြောင်းကို Cover လုပ်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်။ ငါကိုယ်တိုင် လူငယ်ပဲ။ မင်း IT ဘာတတ်နိုင်သလဲ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင် စနစ်မှာ မင်း IT က ဘာ သုံးစားလို့ ရလဲ ? ဒါဆို IT နဲ့လိုချင်တာကို ရအောင်လုပ်ကြကွာ။ ငါ့ကို ကြိုက်သလိုဆဲ။ ငါ့ကိုယ်ငါ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့မနှိုင်းဘူး။ သူ့ ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ စစ်သားတစ်ဦးလောက်တော့ ကြိုးစားနိုင်တယ်။
ဒီတော့ ငါပြောချင်တာ IT ပညာနဲ့လိုချင်တာရနိုင်သလား။ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ရယူနိုင်သလား။ အော်တောင်းပြီး ရနိုင်သလား။ အရပ်ကယ်ပါ လူဝိုင်းပါ နဲ့ ပြင်ပ အကူအညီနဲ့ရနိုင်သလား။ စိမ့်ဝင်ပြီး ရနိုင်သလား။
မင်းတို့ တွေ စစ်ထဲ မ၀င်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကို ကိုးကွယ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မသိကျိုးကျွန်ပြုချင်တဲ့ အရေခြုံ ရေပေါ်ဆီတွေပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပုံတွေဟာ မင်းတို့ နဲ့အတူမရှိသင့်ဘူး။ မင်းတို့ တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နာမည်ကို ခုတုံးလုပ်နေကြတာပဲ။ ဘယ်သူတွေဆဲဆဲ စစ်မှုထမ်းခွင့်ပေးရင် ငါ အရင်ဆုံးဝင်မယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ခေတ်တုန်းက တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်နဲ.တူတရ် …
ဗိုလ်ချုပ်ခေတ်ဆိုရင်တော့ တိုးဝှေ.ပီးတော့ကို နာမယ်စာရင်းပေးကြမှာ မြင်ယောင်သေးတရ် …
အခုတို.ရဲ.ခေါင်းဆောင်က ဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်တော့ဘူး ….
စိတ်နာအောင်လုပ်ထားလို. စိတ်နာနေကြတာကို … အထူအပါးနားမလည်ဘူးလို. … မပြောပါနဲ. … သခင်ဟောင်းကြီးရယ် ….
2 ယောက်ရပီဗျို့ !!!
ရေး ရေး မြန်မြန်ရေးမှတ်ထားစမ်းပါ တပ်ချုပ်ရာ………….
ကျုပ်လဲပါမယ်ဗျို့၊ ရိုးရိုးစစ်သားတော့ မဖြစ်ချင်ဘူး၊ နောက်တန်းထောက်ပို့ အထိုင်တပ်က ဆီဂိုဒေါင်တာဝန်ခံ လုပ်မယ်။ စုစုပေါင်း သုံးယောက်ရပြီပေါ့။
သရော်ရင်းနဲ့အသက်ကြီးမဲ့ ဆရာတွေ။ သရော်ကြဗျာ။ အခုတို့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်က ဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပဲ။ ဒါဆို ဘယ်သူများလဲဗျာ။ သေသွားတဲ့လူက ခေါင်းဆောင်မဟုတ်တော့တာတော့ ကလေးကအစ သိပါ့။ စာထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ တလုံးမှ မပါဘူးဆိုတာ သေချာလဲ ဖတ်ပါဦး ဘယ်စာပေမှာမှ မသုံးတဲ့ “တရ်” ကို အကြိုက်တွေ့ နေတဲ့ ဖျံသို (ဆောရီး) အာဖျံကွီးရယ်။ ကျုပ် စာဖတ်ဖူးတာက ဂျပန်တွေ တော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုပဲ။ ရွာထဲဝင်ပြီး မိန်းမတွေကို အားပေးတယ်ဆိုပဲ။ မလုပ်တာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုပဲ။ ဒါဆို အဲဒီခေတ်က သူတို့ တော်တော် စိတ်နာကြမှပေါ့။ စစ်တပ်ကို စိတ်နာလို့စစ်ထဲ မ၀င်ကျဘူးလို့ဆိုပါဆို့ ။ ဒီခေတ်ကို ရောက်လာပြီဆိုပါဆို့ ။ Phone တလုံးနဲ့“မုရှိ မုရှိ” လုပ်နေကြမဲ့ မျိုးမစစ်ကလေးတွေ ပုံနေမှာပဲ။ “စိတ်နာအောင်လုပ်ထားလို. စိတ်နာနေကြတာကို … အထူအပါးနားမလည်ဘူးလို. … မပြောပါနဲ. … သခင်ဟောင်းကြီးရယ် ….” ကြိုက်တယ်ဗျာ။ …….အဲဒီခေတ်က အဆွဲခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ကျွန်တော့် အမျိုးတွေ ပါမပါတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိပါဘူး။ စိတ်နာတာနဲ့လုပ်သင့်တာဘာလဲဆိုတာနဲ့ က ရောချလို့ မရဘူးဗျ။ ဖျံသို (ဒုတိယမိ ဆောရီး) အာဖျံကွီး စစ်တပ်ကို စိတ်နာနေတာ….တန်တော့ ? ……..ဟီးဟီး…..ကိုယ့် အသားထိမှ နာတာမျိုးတော့ဗျာ…..။
အကုန်ပိုဆိုးကုန်ပါလိမ့်မယ်။ နွားတွေကိုလည်း ပလာတာကျွေးလို့ကမရနဲ့။
သိတဲ့သူများပြုံးကြလေပြီ။ ကျုပ်ကတော့ပြောစရာရှိတာပြောပီးပီဗျာ။ ဒီလောက်ဆို အကုန်လုံးလဲသဘောပေါက်ပီးပီ။ ကျုပ်တို.ကတော့ ကိုယ်တိုင်ထိမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ အမျိုးအစားထဲက မဟုတ်ဘူး။ သူများနာကျင်ရင်လဲ ကိုယ်ပါနာကျင်တတ်တဲ့ အမျိုးအစားထဲကဗျ။ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာအတွက်ဆိုရင်တော့ ကျုပ်ဘ၀က ဆုတောင်းကောင်းပီးသား။ ကျုပ်အသက်က အခုမှ ၂၂။ သရော်ရင်းနဲ. အသက်ကြီးရင်လဲ ကြီးပါစေဗျာ။ လုပ်သင့်တာလုပ်ဖို.စိတ်တော့ ကျုပ်မှာပါလာသားဗျ။
ကြည့်ရတာ ..ဒီလိုနဲ့.. ပြီးသွားဦးမယ်ထင်တယ်.။
ပြီးသွားမယ်ဆိုတာက.. အခြေခံဥပဒေလို..။ ရွေးကောက်ပွဲလို .. ပွဲပြီးပြီးသွားတာ.. ပြောတာနော..။
နောင် တနှစ်လောက်ဆို.. မြန်မာပြည်ထဲ ..သူပုန်မရှိသလောက်ဖြစ်သွားမှာပါ..။
ဆိုတော့ .. စစ်မတိုက်ရလောက်ပါဘူး..။
ကချင်ဖက်ကို.. တရုတ်တပ်တွေဝင်သွားပြီ သတင်းရထားပါတယ်..။ အဲဒီကမြစ်ဆုံမှာရှိတဲ့ ..တရုတ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ လုံခြုံရေးအတွက်တဲ့..။
မွန်-ကရင်ဖက်ကို ..မကြာခင်..ယိုးဒယားတပ်တွေ ၀င်တော့မှာပါ..။ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို ..ဘီလီယံချီ သူတို့မြုတ်နှံလိုက်ပြီကိုး..။
ဆိုတော့..ရှမ်းနဲ့..၀ တပ်က ..လက်နက်က တရုတ်ကရတာဆိုတော့ .. ဒန်တန်တန်ဖြစ်ဖို့ များနေပြီ..။
ရခိုင်ဖက်ကလည်း.. ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက .. လှိမ့်ဝင်တဲ့လူနဲ့တင် … ချာလပါတ်လည်နေပြီ..။
စွမ်းအင်အခြေခံတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်လာပြီမို့.. ကမ္ဘာ့ပါဝါကြီးတွေ စိတ်ဝင်စားဖို့ ဖြစ်လာပါပြီ…။
ကမ္ဘာ့စစ်ကြီးတွေဟာ.. စွမ်းအင်ကိုသာ အခြေခံပြီး ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီအတွက် … လူတိုင်းစစ်ပညာမတတ်ထားရင် မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ .. စိတ်အခြေခံကနေ .. ဒီဥပဒေဖြစ်လာတယ်ထင်မိပါတယ်.။
ခြေလှမ်းများ နည်းနည်းမှားရင်တော့ … တောင်မြောက်..ပြတ်ထွက်သွားမလားပဲ..။
ကျွန်တော် တကယ်မသိလို့မေးတာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ မပြဋ္ဌာန်းတဲ့တိုင်းပြည် ဘယ်ဟာက ပိုများပါသလဲ။ မပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ တကယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့သလားဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။
သိတဲ့သူများပြုံးကြလေပြီ။(စာနှင့် ဆွေးနွေးရာနေရာတွင် အပြုံး မမြင်ရပါ။) ကျုပ်ကတော့ပြောစရာရှိတာပြောပီးပီဗျာ။ ဒီလောက်ဆို အကုန်လုံးလဲသဘောပေါက်ပီးပီ။(ကိုဖျံပြောတာကို သဘောပေါက်ကြောင်း ထောက်ခံပေးကြပါ။) ကျုပ်တို.ကတော့ (ကျုပ်တို့ ကတော့ ဆိုတဲ့ အများကိန်းမှာ သွေးရူးသွေးတန်း အဖော်ညှိခြင်း)ကိုယ်တိုင်ထိမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ အမျိုးအစားထဲက မဟုတ်ဘူး။ သူများနာကျင်ရင်လဲ ကိုယ်ပါနာကျင်တတ်တဲ့ အမျိုးအစားထဲကဗျ။(သူများအော်လို့ကိုယ်ပါအော်) ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာအတွက်ဆိုရင်တော့ ကျုပ်ဘ၀က ဆုတောင်းကောင်းပီးသား။(ဖိုမ ဆက်ဆံရေးကြောင့်လူဖြစ်ပါသည်။ ဆုတောင်းကောင်းလို့လူမဖြစ်ပါ။ ဆင်းရဲသား ဖိုမ ဆက်ဆံရင် ဆင်းရဲသားကလေး မွေးပါမည်။ ) ကျုပ်အသက်က အခုမှ ၂၂။ သရော်ရင်းနဲ. အသက်ကြီးရင်လဲ ကြီးပါစေဗျာ။ လုပ်သင့်တာလုပ်ဖို.စိတ်တော့ ကျုပ်မှာပါလာသားဗျ။(ဒါပေါ့ဗျာ။ ငါဘုရားဟောကြားသည် ဆိုလည်းပဲ မယုံသင့် လို့ ဆိုတယ်မဟုတ်လား။)
ယော် …. ကိုယ့်ဆရာတော့ စကားအရှုပ်လုပ်နေပါပေါ့လား။ အကုန်အစအနကောက်ပီး တစ်ခုမကျန် လိုက်ရေးနေတာပဲ။ ကြည့်ရတာကျုပ်ထက်အသက်ငယ်ပုံပေါက်တရ်။ အဲဒါဆိုလဲ ကလေးနဲ.ပြိုင်မငြင်းတော့ပါဘူးဗျာ။ ….
အမြင်မှန်ရသွားလို့ဝမ်းသာပါတယ် ကိုဖျံ။ တခြား အသိညဏ်ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော် ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်တော့မယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးမှ လူကြီးရှက်တော့ ရယ်ဆိုပြီး လျှောချတတ်တာ မှန်သားပဲဆိုတာ သိလိုက်ပြီ။ ကျေးဇူးပဲ။
ကွီး အကိုလေးရေ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ . . 77 အကိုလေးက ဘယ်ရွာသားလဲမှမသိတာ .
အဲဒီလိုလူတွေနဲ.ဆွေးနွေးမရ်ဆိုရင်တော့ NPT ညီလာခံပဲသွားတက်ပါဗျာ။
အဲ … ဒီမှာဆက်ဆွေးနွေးမရ်ဆိုရင်လဲ ခင်ဗျားကို ဘယ်လိုတွေ ပြန်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မရ်ဆိုတာ ကျုပ်မြင်ရတာပေါ့ဗျာ …. သံဝေဂရတာပေါ့ …
မပြောရင်မသိလို. နောက်ဆုံး ထပ်ပြောလိုက်မရ်။ သူများကရွံလို.ရှောင်တာ ရှောင်မှန်းမသိပါလားဗျ။
ကွီးဆရာရေ။ ရွံလို့ ရှောင်တယ်ဆိုရင်လဲ တောထဲရှောင်ဗျာ။ သံဝေဂရတယ် ဘာညာနဲ့လေသံကိုကြည့်တော့ လက်စသပ်တော့ ကွီးဆရာက ဘေးထိုင်ဘုကျ အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့ ၂၂ နှစ်သား တရားသမားပေါက်စပဲကိုးဗျ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ တစ်အိမ်မှာ တစ်ယောက်တော့ စုန်းပြူးဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ရွာထဲက စုန်းပြူးလေးက ကျုပ်ကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့Supporting လုပ်နေတာပဲ။ ကျေးဇူးပဲ။
စစ် ပ ညာ တတ် ချင် လို့ စစ် ထဲ ဝင် မယ် လို့ ဆို လို တာ လား?
ကျနော့်အမြင် ပြောရရင်တော့ တပ်မတော် အရံတပ်ရင်းမှာ စစ်မှုထမ်းခွင့် ရတာနဲ့ စစ်အစိုးရကို ပြန်တော်လှန်နိုင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မနီးစပ်သလိုပဲ …. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိ တပ်မတော်ထဲမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို မကျေနပ်တဲ့ တပ်မတော်သား(စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သား)တွေ အများကြီးကို ရှိပါတယ် …. ဒါပေမဲ့ သူတို့ခမျာ ပေးသမျှယူ၊ ကျွေးသမျှစားပြီး လေသံတောင် ကျယ်ကျယ်မဟဝံ့ကြတာ ကိုယ်တွေ့ပါ …. အစဉ်အလာ ကြီးမားတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက် ကိုယ့်ပြန်ချောက်မဲ့ ကိစ္စမျိုးအတွက် သေချာကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပါတယ် …… ဒါကိုတော့ သံသယ မရှိစေချင်ပါဘူး …..
နောက်တစ်ခုရှိတာက တပ်မတော်သားတွေ အကုန်လုံးကို ရန်သူလို့ မသတ်မှတ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် … သူတို့ဟာလည်း ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ သားသမီးတွေပါ …. ခေါင်းဆောင်တဲ့ လူတစ်စု မကောင်းတာနဲ့ အားလုံးကို မကောင်းမြင်လို့ မရပါဘူး ….
ကိုမြင့်ဆွေ ရေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ စစ်ပညာတတ်ချင်တာ တခုထဲနဲ့ တော့ စစ်ထဲဝင်ချင်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သေချာတယ်။
အော်..မောင်မြင်းဆွေးတပိကိုး။ ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ် …. ဇက်ကြိုးခွံ့ထားသောမြင်းပြေးသံ
ကိုဇ၀နရေ။ ခင်ဗျားပြောတာ လက်ခံပါတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ ပုံတူ မကူးချဘူးပေါ့ဗျာ။ အရင်ခေတ် အတွေးအခေါ်နဲ့ တော့ ဘယ်တူမလဲ။ ဆွေးနွေးတာ ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးအောက်မှာ ဆိုတော့ အမြင်ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီ post တခုကိုပဲ ဖတ်ပြီး ဝေဖန် မစောပါနဲ့ ဦး။ စစ်သားဟာလဲ ပြည်သူပဲဆိုတာကို ခင်ဗျား ဒီ အောက်က Post ကို ဖတ်ကြည့်ရင် သိလာမှာပါ။ http://myanmargazette.net/38511/economic-news-international-news-news-industry-people-in-the-news-us-news-news
လိုက်လို့မမှီနိုင်လောက်အောင်ပါ….ဆရာကြီးအဆင့်= 40 ကျော် ထင်ပါတယ်..။။…။။…..
မ တ ရားမှူတွေ ပြည်.နှက်နေတဲ့ ဒီ စစ် အာဏာ အောက် မှာ စစ် ထဲ ဝင် ရ မှာ ထောင်ကြတာထက်ကြောက်တာ မဆန်းပါဘူး
ကို ZIPPO ရေ။ ခင်ဗျားက ရိတာလား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး။ ကျုပ် အသက်က စစ်ထဲဝင်လို့ ရတဲ့ အရွယ်ကောင်းပါ။
ကိုဇ၀နရေ။ ကျွန်တော့် စကားထဲမှာ စစ်အစိုးရကို ပြန်တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ အရင်ခေတ်က နည်းစနစ်ဟောင်းကြီးကို ပြန်ပြီး ကော်ပီကူးထားတဲ့ အတွေးအခေါ် မပါဘူးဆိုတာ အခေါက်ခေါက် သေချာစွာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် တွေ့ ရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဒီရွာထဲမှာ ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလဲ သိမှာပေါ့။ အပေါ်က Comment ကိုလဲ တဆိတ် ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ပြီးတော့ “သူတို့ လဲ ငြင်းကြခုန်ကြ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့Post ကိုလဲ ဖတ်လိုက်ပါဦး။ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတယ်ဆိုတာ အသိညဏ် မရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အလုပ်ဗျ။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်တဲ့ ဦးဏှောက် က ခင်ဗျားမှာရှိသလို ကျုပ်မှာလဲ ရှိတာပဲ။ ခင်ဗျားရဲ့Comment ဟာ မလွန်ပေမဲ့ Perfect မဖြစ်ပါ။
အယ်မလေး အရပ်ကတို့ရေ….အရင်ဝင်ချင်လည်း ၀င်တော်မူပါဗျာ..။ ဘယ်သူမှ မတားပါဘူး။ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ပြမှ တွေဘာတွေစောင့်မနေပါနဲ့ အခုကတည်းက ဘူတာရုံတွေ ၊ သဘောင်္ဆိပ်တွေ မှာ တပ်သားစုဆောင်းရေးတွေ ရှိပါတယ်။ အနော်ဝင်ချင်လို့ပါလို့ ဆိုရင် မြန်မာ တပ်မတော် က စစ်သားကြီးတွေ က သွားကြီးဖီးဖီးနဲ့ ကြိုနေပါလိမ့်မယ်။ (သူတို့လည်း ဆန်တစ်အိပ်လား ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်လည်းမသိဘူးရဦးမယ်လေ (ကုသိုလ်လည်းရတာပေ့ါ)။ အဲမောင်ရင် အခုလိုကြိုပြီးဝင်တဲ့အတွက်လည်း နောက် ဥပဒေများပြထမ်းတဲ့ အခါကျတော့ မောင်ရင်က နောင်မ၀င်ချင်ဝင်ချင်တွေထက် ဆရာဖြစ်ရင်ဖြစ် မဖြစ်ရင်လည်း ရှေတန်းမှာ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ စစ်ပညာတွေသင်ပေါ့။ (မြန်မာစစ်ကားတွေထဲကလို တပ်သားနဲ့ ၀င် စာမေးပွဲတွေဖြေဆိုပြီး ဗိုလ်ကြီးတွေဘာတွေ ရွှတ်ခနဲ ရွှတ်ခနဲဖြစ်နေချင်ဖြစ်နေမပေါ့) နောက်မှ ၀င်မိသူတွေက ဆရာကီးတွေဘာတွေခေါ်ခံရပေါ့။ အဲဒီတော့မှ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ တိုက်ယူမှ ရမယ်ဆိုတဲ့ မောင်ရင်ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ တပ်မတော်သားသစ်တွေကို စုဆောင်းပြီး သန်းရွှေတပ်မတော်ကို တော်လှန်မယ် nigimi 77 တပ်မတော်ဆိုပြီး လှို့ဝှက်အဖွဲ့ တွေဘာတွေခိုးဖွဲ့ပေ့ါ..ကောင်းပ…။ မောင်ရင့်ရဲ့ တပ်တွေနည်းနည်းလေး အနံ့ထွက်လာပြီဆိုမှ…စုပေါင်းပြီး အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကို တိုက်ထုတ်ရမယ်လို့ ကြွေးကျော်ပြီး.တော်လှန်ေ၇းနေ့ စစ်ရေးပြ အခန်းအနာတွေ သင်တန်းဆင်းပွဲတွေဘာတွေမှာ …ရရာ ၀ါးရင်တုတ်၊ လေးခွ ၊ပေါက်တူး၊ အုတ်ခဲကျိုး စတဲ့ ခေတ်မီလက်နက်တွေနဲ့ သန်းရွှေတပ်မတော်ကို တိုက်ထုတ် …ပြီးအောင်ပွဲခံ မြန်မာပြည်ကြီးလည်း နောက်ထပ်တစ်ဖန်လွတ်လပ်ရေးရ အယ်မလေး ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ..။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက လည်း မောင်ရင်ရဲ့ nigimi77 တပ်မတော်ကြီးကို သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆို လို့ ခေတ်သစ် အာဇာနည်ကြီးတွေလို့ နာမည်တပ် ။ ၂၁ရာစုတော်လှန်ရေးနေ့တွေဘာတွေ လုပ်လို့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကျင်းပနဲ့..။ အဟိတွေးမိတာနဲ့ အတော်ကိုကြည်နူးစရာပါပဲ။ အဲဒီ အချိန်က မောင်ရင်က ရာထူးတွေဘာတွေတက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတွေဘာတွေဖြစ်နဲ့ပေါ့..။ အင်မတန်ကောင်းမွန်လှတဲ့အတွေးနဲ့ အင်မတန်မွန်မြတ်လှတဲ့ စိတ်ကူးဗျာ..။ ကျွန်တော်တို့တွေကလည်း အဲဒီအခါကျတော့ လက်ခုတ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးအောဘာတွေပေးကျ ။ ငါတို့မန္တလေး ဂေဇက်မှာ အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့လူက လာရေးဖူးတယ်ကွ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူတဲ့လူကလည်းယူပေါ့.။. အားပေးတယ်ဗျာ ဆက်လုပ် နာမည်ကြီးရင်သာ ကျွန်တော်ကိုမမေ့နဲ့ဗျာ..ဟဲဟဲ..သိတယ်မဟုတ်လား ပါမစ်လေးတို့ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတို့တော့ မစပေါ့ဗျာ..ဟုတ်ပြီးလား..။
အဲဒီလို ပေါကြောင်ကြောင် စိတ်ကူးမျိုးနဲ့စစ်ထဲကို ခင်ဗျားပဲ ၀င်ပေါ့ဗျာ။ ယောကျာင်္းချင်းတူရင်တောင် အတိုအရှည်တော့ မတူပါဘူး။
ဒီဂေဇက်မှာ အသက်ငယ်သလောက် စကားပြောရိုင်းတဲ့လူမျိုး ခင်းဗျားတစ်ယောက်ပဲ တွေ့ဖူးသေးတယ်။ ဒါခင်ဗျား ချပြတဲ့စိတ်ကူးလေ။ ခင်ဗျား ပြောသလို စစ်မှုထမ်းတော့ ခင်ဗျား ပါပါတွေက လက်နက်တွေများ ခင်ဗျားကို တပ်ဆင်ပေးမယ်များထင်နေသလား။ ခင်ဗျား ၀ါးရင်တုတ်တောင်ကိုင်ရ ကံကောင်းမှတ် ။ ခင်ဗျာတို့လို ဖိုးရွချင် ဖိုးဝင်ချင်ကောင်တွေကို အရင် ဆုံး သူတို့ မဖြတ်တဲ့မိုင်းကွင်းထဲ ဖြတ်ပြေးခိုင်းမှာ ပူးသတ်ဖို့ ကတော့ ဝေးစွ ခြောက်ပါး ။ မှတ်ချက်။ ။ မောင်ရင် လူဆို လူအဆင့်အတန်းနဲ့နေပေါ့ ..။ ဒီမှာမောင်ရင် ရေးတဲ့ ပိုစ်တွေ comment တွေက ရိုင်းစိုင်းနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိနေတယ်။ ကျုပ်ကတော့ လမင်းကို ဟောင်နေတဲ့ ခွေးကို အိပ်ရေးပျက်ခံပြီးတော့ ထထမကြည့်နိုင်တော့ဘူးမောင်ရင်ရေ.။
comment တွေဖတ်ရတာ ခေါင်းတောင်မူးလာပြီ ရန်ဖြစ်စရာရှားလို့ရွာထဲလာဖြစ်နေကြတယ်
ခင်ဗျားလို အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့လူတွေများနေလို့တိုင်းပြည်က လက်တစ်ဆုပ်စာရဲ့သဘောရှိလုပ်တာကို ခံနေရတာ။ အင်းပေါ့လေ၊ နှိပ်ကွပ်ခံ ကာလက ကြာပြီဆိုတော့ မြင်နေ ကြားနေကြ အကျင့်ပျက် အတွေးအခေါ်တွေက ခေါင်းထဲ သံမှိုရိုက်သလို စွဲနေမှာပဲ။ ခင်ဗျားလို လူမျိုးတွေ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ခေတ်ထဲကရှိတယ်လို့ကျုပ်မိဘတွေက ပြောပြတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေပေါ်လာလို့ခင်ဗျား စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုရင် မ၀င်ပါနဲ့ ဗျာ။ ယိုးဒယားဖက်သွားပြီး “သင်း” လိုက်ပါလား။ ကျွဲပါးစောင်းတီးဆိုတဲ့ စကားဟာ အလကားရှိတာမဟုတ်ဘူးပဲ။ ခင်ဗျား အသက် ဘယ်လောက်ရှိလို့ဒီလို အတွေးအခေါ်တွေ ရှိနေလဲဆိုတာ မပြောတတ်ပေမဲ့ သေချာတာက ခင်ဗျားရဲ့ Next Generation တွေလဲ ဒီလိုပဲ အာချောင်ရင်း ကျန်နေခဲ့မှာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ စကားက ဖာနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်တဲ့။ မိန်းမဖာလား ယောကျာင်္းဖာလားတော့ မသိဘူး သေချာတာကတော့ ယောကျာင်္းဖာတွေများလာတယ်။
စကားပြောရင် မတန်မရာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ခဏခဏကိုင်ကိုင်မပေါက်စမ်းပါနဲ့ကွာ..။
ကျုပ်က စစ်ထဲ မ၀င်ဘူးလိုလည်း မပြောဖူးဘူး၊ ၀င်မယ်လို့လည်း မကြွေးကျော်ဘူး ။ ဒင်းတို့ တိုက်ဖို့ သူတို့ပြထမ်းတဲ့ အခါမှစစ်ထဲဝင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုတိုက်ချင် အခု ၀င်လို့ရနေတာပဲ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ မြန်မာပြည်မှာပေါမှပေါ..ကြိုက်တဲ့ တပ်ထဲ ၀င် စစ်ပညာသင် ၊ ကြိုက်သလိုတိုက်လို့ရတယ်။ သေချာတာက အခုလို ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့ ပညာတွေက ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ စကားပြောရင် ယှဉ်ယှဉ်ကျေးကျေးပြောစမ်းပါကွာ..။ ဘာလည်း အမိယုတ်တော့ နှုတ်ကြမ်းဆိုတာမျိုး သူများထင်နေရောမယ်မောင်ရင်ရယ်။
အခုကစပြီး.. တရက်… ရွာသားတွေ သဘောထားအတိုင်းဖြစ်အောင် .. အမှတ်ပေးစံနစ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပါမယ်..။
Like or Dislike: မှာ .. Dislike:များပြီး ..Hide ခံထားရတာကို ဖျက်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်း..။